Noraran'i Norvezy ny fameperana COVID-19 rehetra, miverina amin'ny fiainana mahazatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Noraran'i Norvezy ny fameperana COVID-19 rehetra, miverina amin'ny fiainana mahazatra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Norvezy • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fanapahan-kevitry ny governemanta hanala ireo fameperana henjana COVID-19 dia tonga 561 andro taorian'ny nampidirana azy ireo voalohany mba hampiadana ny fihanaky ny virus coronavirus, miaraka amin'ny manampahefana ara-pahasalamana norvezianina koa manome jiro maitso ho an'ny fameperana hafa, toy ireo eny amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena ary handeha hifarana. amin'ny herinandro ho avy.
Hofoanan'i Norvezy ny ankamaroan'ny fepetra fanaraha-maso ny aretina, ary hanome "fisaorana lehibe" ho an'ny olom-pirenena nanaiky.
Na dia hisy aza ny fepetra horaisina ao anatin'ny 24 ora manaraka, dia nanentana ny orinasa ny praiminisitra norveziana mba tsy hanomana ny fiverenan'ny mpanjifa raha tsy rahampitso.
Na izany aza, nanentana ireo olom-pirenena mendrika ny tompon'andraikitra norveziana mba hanao antoka fa vaksinina feno izy ireo, amin'ny famaritana izany ho "adidiny sivika".
Hisokatra tanteraka i Norvezy amin'ny asabotsy 25 septambra, hamarana ny famerana COVID-19 amin'ny orinasa sy ny fifandraisana ara-tsosialy, hoy ny praiminisitra nasionaly androany.
Ny praiminisitra Norvezy Erna Solberg
“Ankehitriny hiverina amin'ny fiainana mahazatra isan'andro isika,” hoy ny praiminisitra Norvezy Erna Solberg, raha niresaka tamin'ny valandresaka ofisialy iray androany.
Androany dia nilaza tamim-pahamendrehana i Solberg fa, manomboka amin'ny 4 hariva (3 hariva GMT) rahampitso (Sabotsy 25 septambra), Norvezy dia "hanala ny ankamaroan'ny fepetra fanaraha-maso ny aretina" ary hanome "fisaorana lehibe" ho an'ny olom-pirenena nanaiky.
Raha hisy ny fepetra horaisina ao anatin'ny 24 ora ho avy, ny praiminisitra norveziana dia nanentana ireo orinasa mba tsy hanomboka hiomana amin'ny fiverenan'ny mpanjifa mandra-pahatongan'ny rahampitso, satria mbola mipetraka ny lalàna mandra-pahatongan'ny "fotoana iraisana" nifanarahana.
Na dia mahazo aina tsara aza ireo manampahefana norveziana hanomboka hanokatra ny firenena, nanentana ny olom-pirenena mendrika izy io mba hanao antoka fa vaksinina feno izy ireo, amin'ny famaritana izany ho "adidiny sivika" ary famoahana ny antso ho an'ireo "vondron'olona vitsy an'isa" izay mbola tsy nahazo ny jab.
Ho valin'ity fanambarana ity dia nanambara ny Lehiben'ny Confederasionan'ny Orinasa Norveziana, Ole Erik Almlid, fa izany no "nandrasan'ny fiarahamonina iray manontolo," na dia "mbola tsy tratra ny tsipika fahatongavana," miaraka amin'ny asa mbola ho avy mandra-piorenan'ny indostria tanteraka.